प्रधानमन्त्री ओली रेष्टमा, भएको चै के हो खास ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
प्रधानमन्त्री ओली रेष्टमा, भएको चै के हो खास ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिसन्चो भएपछि नेकपाको चियापानमा पनि सहभागि भएनन । उनी सरकारी निवास बालुवाटारमा नै आराप गरेर बसेका छन् । उनको छातीमा सङ्क्रमण भएपछि चियापान कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । उनी अझै दुईदिन आराप गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सामान्य रुघाखोकी, भाइरल ज्वरो र छातीमा सङ्क्रमण देखिएकाले चिकित्सकले कम्तिमा तीन दिन आराम गर्न सल्लाह दिएको उनको सचिवालयको भनाई छ । उनलाई चिकित्सकले बढी भीडभाडमा नजान समेत सल्लाह दिएको छ ।